ဈေးကွက်ရရန် ‘P’ လေးလုံး – CEO Business & Management Magazine
ဈေးကွက်ရရန် ‘P’ လေးလုံး
Article Feature Highlight Management
မိမိထုတ်ကုန်ဈေးကွက်တင်ရာတွင် အသုံးပြုရမည့် P လေးလုံးမှာ မည်သည့်အရာများဖြစ်သည်ကို အများလက်ခံနားလည်နေသည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဖြစ်ပြီး ရိုးရှင်းသောစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ ဖြစ်သည်ဟုပင်ဆိုရမည်။
Four Ps မှာ ဈေးကွက်ရရန် အခြေခံအကျဆုံးသဘောတရားဖြစ်သော်လည်း အမှန်မှာ ရောင်းချခြင်း (Selling) နှင့်သော်လည်းကောင်း၊ အရောင်း (Sales) နှင့်သော်လည်းကောင်း ထပ်တူသဘော မဟုတ်ပါ။ ရာစုနှစ်အစ Industry စက်မှုလုပ်ငန်းကြီးများဖြစ်ထွန်း စဉ်ကာလကထုတ်လုပ်မှုကိုသာ အဓိကထားသည်။ မိမိထုတ်လုပ်နိုင်မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်၊ ရောင်းရနိုင်သော ဈေးဖြင့် ရောင်းနိုင်ရန်ကိုသာ စဉ်းစားသည်။
ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီး အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်မှုမှာ အခက်အခဲမဟုတ်တော့ဘဲ စားသုံးသူများလည်း ထိုက်သင့်သလောက် နေနိုင်စားနိုင်သောအခါတွင် ပြိုင်ဆိုင်ရောင်းချမှုမှာ ရှေ့တန်းရောက်လာသည်။ ရောင်းချမှုတွင် အရေးပါလာသောမေးခွန်းများမှာ ရောင်းချနိုင်ခြေရှိမရှိနှင့် ဈေးနှုန်းစရိတ် ကာမိနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ဝယ်သူအမှန်တကယ်လိုအပ်မှု ရှိ-မရှိကို အရေးမထားပေ။ ကုန်များထုတ်လုပ်ပြီးမှသာ ဈေးကွက်ရရန်အတွက် ရောင်းပုံရောင်းနည်းများ ဖန်တီးယူသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးတွင်မှ ‘Marketing’ဆိုသည့် သဘောတရားမှာ ထွက်ပေါ်လာသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ စားသုံးသူများ၏ ဝယ်အားကောင်းလာမှုကြောင့် စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူစားသုံးလာကြသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် ဝယ်သူလိုလားသည့်အရာကို သိဖို့လိုလာသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဈေးကွက်ရရန် အရေးထားသည့် Marketing Concept ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဝယ်သူများအလိုကို ဖြည့်ဆည်းရန်လို အပ်မှုများ မှာ 4Ps (P လေးလုံး) အဖြစ်စဉ်းစားလာရသည်။ ရောင်းအားကောင်းရန် ပါဝင်ရမည့် အမျိုးမျိုးတို့ကို Marketing Mix ဟု ညွှန်းသည်။
Marketing ၏ Pလေးလုံးမှာ . . .
Product – ရောင်းချမည့်အရာ
ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ သွားလိုရာခရီး၊ အကြံဉာဏ်တို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင် ဆုံးဖြတ်ရမည်တို့မှာ ကုန်ပစ္စည်း၏ပုံ၊ အရည်အသွေး၊ ထုပ်ပိုးမှုတို့နှင့် ရောင်းချပြီးနောက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုတို့ဖြစ်သည်။
ဝယ်သူများ မည်မျပေးနိုင်မည်ကို ခန့်မှန်းရန်လိုသည်။ အရောင်းမှာဝင်ငွေရသည့် တစ်ခုတည်းသောအကြောင်း ဖြစ်ပြီး ကျန်ကိစ္စများမှာ စရိတ်စကဖြစ်သည်။ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် အများဆုံးရနိုင်သည့်ဈေးဖြင့်ရောင်းပြီး နောက်ပိုင်းလျော့ချပေးခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ရန် ဈေးဦးလျော့၍ ရောင်းခြင်းတို့ကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရမည်။ မည်သို့ Discount များပေးမည်၊ အချိန်အခါအလိုက် ဈေးလျော့ပေးခြင်းနည်းတို့ကို သုံးမည် မသုံးမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရမည်။ ဈေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဈေးတင်ခြင်း၊ ဈေးချခြင်းတို့မှာ လွယ် လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်သည်။ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါအရ လုပ်ဖို့လည်း လိုလာတတ်မြဲဖြစ်သည်။
စားသုံးသူများလက်သို့ လွယ်ကူစွာရောက်နိုင်ရန်မှာ နေရာမှန်တွင်ရှိဖို့ အရေးကြီးသည်။ နေရာမှန်ဖြစ်ရန်မှာ မိမိရွေးချယ်ထားသော ဖြန့်ဖြူးမှုလမ်းကြောင်းအပေါ် မူတည်သည်။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထား၍ လည်းကောင်း၊ စာတိုက် သို့မဟုတ် ကုန်ပို့လုပ်ငန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ တယ်လီဖုန်းအင်တာနက် စသည်တို့မှ မည်သို့အများဆုံးရောင်းချသည့်အပေါ် မူတည်သည်။ လက်လီလက်ကား ရောင်းသူများမှ တစ်ဆင့်လည်း ဖြန့်ဖြူးနိုင်သည်။ ဈေးကွက်ကို မည်သို့ခြုံငုံဖြန့်ဖြူးလိုသည်ဆိုသည့် အချက်ကလည်း အရေးပါသည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်ရန် အချို့နေရာများကို ရွေး၍သော်လည်းကောင်း၊ အထူးတလည်သီးသန့်နေ ရာများမှ ဖြန့်ဖြူးခြင်းသော်လည်းကောင်း လိုအပ်သလို ရွေးရမည်။ နေရာရွေးရာတွင် ကုန်သယ်ယူပို့ဆောင်မှု၊ သိုလှောင်မှုနှင့် အလုပ်လုပ်ရာနေရာတို့သည်လည်း အရေးကြီးသည့်အချက်များဖြစ်သည်။
Promotion – ဈေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်း
အရောင်းမြှင့်တင်ရန် ကော်မရှင်ပေး၍ သတင်းစာ၊ ရေဒီယို၊ တီဗီ၊ ဆိုင်းဘုတ်စသည်တို့ဖြင့် ကြော်ငြာနိုင်သည်။ Sponsor ပေးခြင်း၊ ပြပွဲများလုပ်ခြင်း၊ ကြော်ငြာစာရွက်များကမ်းခြင်း၊ လက်ဆောင်ကမ်းခြင်းတို့ဖြင့် လုပ်နိုင်သည်။ Promotion လုပ်ခြင်းမှာ အချိန်အခါအလိုက်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အင်တာနက်ခေတ်တွင် Promotion လုပ်ပုံများ ပြောင်းလာသည်။ Customization ဟုခေါ်သည့် ဝယ်သူတစ်ဦးချင်းစီအရောက် ဆက်သွယ်မှုနည်းများ သုံးလာသည်။ သို့ရာတွင် 4Ps မှာ အသုံးတည့်ပြီး ယနေ့အထိ နည်းလမ်းကောင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ ဒေါ်ရီရီမြင့် (ပါမောက္ခ- ငြိမ်း၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်)